सं'सारको सबै तरका'री मध्ये सबै भन्दा धेरै शरीरलाई फाइ'दा गर्ने तरकारी : स्कुस - HPsanchar.com
October 15, 2020 biplov adhikari खानपान 0
६ क्या’न्सर कम गर्न सहयोग उच्च पो’षणयुक्त फलफूल र तरकारीको उपभोगले विभिन्न प्रकारका क्या’न्सरको जोखिम कम गर्न मद्दत पुर्याउने गर्छ । एक अध्ययनले निश्चित मात्रामा स्कुसको सेवन गर्दा त्यसमा रहेका यौगिकहरूले क्या’न्सर हुन सक्ने कोषिकामा त्यसको असर कम गर्ने गरेको देखाएको छ । यद्यपि यी नतिजाहरू पूर्ण क्या’न्सर प्रतिरो’धी भनेर प्रमा’णित तथ्य भने होइनन् । तर यसले क्या’न्सर कमगर्न सहयोग गर्छ भन्ने विषय भने विभिन्न अध्ययनबाट प्रमाणित विषय हो । यसबारे थप अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ । ७. बुढेसकालमा हुने दृ’ष्टिदोष कम गर्न फ्रि रेडिकल भन्ने एउटा मुख्य सिद्धान्त हुन्छ । जसले श’रीरका विभिन्न कोषहरूमा क्षति पु¥याएर उमेर ढल्किँदै गएपछि हुने दृ’ष्टिदोष कम गर्न पनि मद्दत पुर्याउँछ । यसैले, भि’टामिन सी पर्याप्त पाइने यो तरकारीको नियमित सेवनले बुढेसका’लको दृश्य कम गर्न मद्दत गर्छ । ८ मि’र्गाैलाको कामलाई सहज बनाउन फ्याटी लि’भर डि’जिज भनेको एउटा यस्तो स’मस्या हो जसमा अत्यधिक बोसो क’लेजो छेउमा जम्मा हुन्छ । क’लेजोमा जमेको धेरै बो’सोले यसलाई ठीकसँग काम गर्न अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ । यसरी नियमित स्कुसको सेवन गर्दा क’लेजोमा बो’सो जम्ने कामलाई यसले नि’यन्त्रण गर्न सक्छ । मु’सामा गरिएको अध्ययनले पनि स्कुस खुवाएको मुसामा को’लेस्ट्रोल र फ्या’ट्टी ए’सिडको मात्रा कम पाइएको थियो । तर यसमा यो पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ कि स्कुसले मान्छेको क’लेजो स्वा’स्थ्यमा कसरी सहयोग पु¥याउँछ ? ९ स्व’स्थ रूपमा व’जन बढाउन विभिन्न अध्ययनहरूले स्कुस नियमित सेवन गर्नेमा तौल बढ्ने तर यसले मो’टोपनाको कुनै स’मस्या ननिम्त्याउने समेत देखाएको छ । पछि तौ’ल घ’टाउनु पर्ने अवस्था आयो भने पनि सहजै घ’टाउन सक्ने गरी सन्तुलित रूपमा यसले तौला बढाउन मद्धत गर्छ । १०. पा’चन स्वा’स्थ्यलाई सहयोग पुर्याउँछ तपाईंको पा’चन प्रणा’लीमा आवश्यक पर्ने विभिन्न कार्यमा सहयोग गर्नको लागि स्कुस आफैँमा सहायक सिद्ध खानेकुरा हो ।